I-Journos Inokudala iiNdaba zeeNdaba zeeNdaba ngeeNkqubo zokuHlahla iiHlengi
Zama ezi Zindlela eziNinzi kwiinkqubo eziNinzi kunye neziNzima
Ndibhalile kakhulu malunga nokufuna ukuba iindlebe zentatheli zifanele zizuze njani izakhono zobugcisa ukuze zenzeke ngokuthengisa. Ngeendawo ezininzi zeendaba ezibandakanya ividiyo kwiwebhusayithi yazo, ukufunda indlela yokudubula nokuhlela iingxelo zeendaba zedijithali kukufuneka.
Kodwa ngelixa idijithali yeso sikhokhi ngoku iyakubethelwa ngento elula kwaye engabizi njengefowuni, iiprogram zeprogram ze-software zokuhlela i- Adobe Premiere Pro okanye i-Apple's Final Cut ingaba nzima kubaqalayo, zombini kwiindleko kunye nobunzima.
Iindaba ezilungileyo kukuba kukho ezininzi iindlela zokunceda. Abanye, njengeWindows Movie Maker, mhlawumbi sele sele bekhompyutheni yakho. Abanye bangakhululwa kwiwebhu. Kwaye ininzi yale nkqubo ye-free editing programs ilula kakhulu ukuyisebenzisa.
Ngoko ukuba ufuna ukufaka iingxelo zeendaba zedijithali kwiiblogi okanye kwiwebhsayithi yakho, zikhetho zizakukuvumela ukuba wenze ukulungiswa kwevidiyo eyimfuneko ngokukhawuleza kwaye engabizi. (I-caveat apha kukuba xa ekugqibeleni ufuna ukuvelisa iividiyo ezikhangeleke ngezobuchwepheshe, mhlawumbi uya kufuna ukuqala i-Premiere Pro okanye i-Final Cut ngexesha elithile. Lezo ziinkqubo ezisetyenziswe ngabaculi bee-videographer kwiiwebhsayithi zeendaba, kwaye ufanele ukufunda.)
IWindows Maker ikhululekile, isofthiwe esilula ukuyisebenzisa eyokuvumela ukuba wenze ulungiso olusisiseko lwevidiyo, kuquka ukukwazi ukufaka izihloko, umculo kunye noshintsho. Kodwa qaphela: Abasebenzisi abaninzi bathi inkqubo iphazamiseka rhoqo, ngoko xa uhlela ividiyo ugcine umsebenzi wakho rhoqo.
Ngaphandle koko ungalahlekelwa yinto yonke oyenzile kwaye kufuneka uqale kwakhona.
Umhleli wevidiyo we-YouTube
I-YouTube yiyona ndawo ekhethiweyo ye-video yokulayisha indawo, ngoko kuyacaca ukuba inikeza inkqubo yokuhlela yevidiyo. Kodwa ugxininiso apha ku-BASIC. Unokwenza unciphise iziqeshana zakho uze ungeze utshintsho oluhle kunye nomculo, kodwa oko kukuthi.
Kwaye unokwenza kuphela amavidiyo osuke ulayishe kwi-YouTube.
IMovie ilingana ne-Apple yeWindows Movie Maker. Kuza kufakwe kwi-Macs mahhala. Abasebenzisi bathi yiprogram yokuhlela eyisiseko, kodwa ukuba unayo iMac, awukho inhlanhla.
I-Wax iyisofthiwe yokuhlela ividiyo yamahhala esona yinkqutyana ngakumbi kunezinye iinkqubo ezikhankanywe apha. Amandla ayo akwiindawo ezikhethiweyo ezikhethiweyo. Kodwa i-sophistication yayo enkulu ithetha i-curve learning curve. Abanye abasebenzisi bathi kungenangqungquthela ukufunda.
Olu luhlelo lolungiso oluthile oluza kuzo zombini iinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulwayo, kodwa abantu abazisebenzisayo bathi le nguqulo yamahhala inika amanqaku amaninzi. Kakade, njengaye naziphi na iinkqubo ezilungeleleneyo zokuhlela, ii-Lightworks zithatha ixesha lokufunda, kwaye zinokubangela ukwesabisa i-neophytes.
I-WeVideo yiprogram yokuhlelwa kwefu efika kwiinguqulelo ezihlawulelwayo ezihlawulelwayo. Kuhambelana nePC kunye ne-Mac, kwaye unikezela abasebenzisi amandla okusebenza kumavidiyo abo naphina, okanye ukwabelana kunye nokusebenzisana kwiiprojekthi zokuhlela iividiyo.
Abasebenzisi bee-Facebook basebenzisa i-Facebook ukufumana imithombo kunye nokukhuthaza iindaba
Ngaba abalobi beendaba mababe nenjongo okanye bathethe inyaniso?
Iindlela zokuBhala iindaba zewebhu kwiWebhu
Ngaba ukukhathalela kwiindaba ezimbi?
Injongo kunye nokuLungisa kwi-Journalism
Uninzi lwabagadi beendaba?
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngomdla-ndlebe
Nantsi Indlela kwaye Kutheni Abathathi-ndaba kufuneka bagweme i-Checkbook Journalism
Isikhokelo sembali kunye nesimboli seJeet Kune Do
Iimfazwe zeRoses: Ingqwalaselo
Iifayile ze-Animated GIF zokuSebenzisa ii-E-Greeting Cards ze-Diwali
I-Requisitos para patrocinar i-residencia isigxina esaziwayo
Jorn Utzon Architecture Portfolio yemisebenzi ekhethiweyo
Ulawulo lwezoKutya noLawulo lweeMithi
Isikhokelo soBume bebhola
Ukudibanisa amaFrentshi amaFrentshi amaTant vs Autant
I-Top 10 ekhunjulwayo I-Pop Song Ingoma ka-2012
20 Umhlaba, i-Wind & Fire Classics
I-Fish flying: i-Top Bait ye-Big Game i-Pelagics
Iyiphi indlela yeSilik kwiMbali yamandulo?
Isicwangciso soHink Pinks Isifundo se-Elementary School Students
Ukhetho lukaNicholas lubonisa ukuHlola kweNcwadi
'IPapel' ibhekise ngaphezu kwePhepha
Ngaba Ubuqhetseba Unqulo?
I-Gold Gold Wing Ubude bexesha elide
Isingeniso kwi-Theory ye-Intelligences ezininzi